प्रहरीको फेक इन्काउन्टरमा मारिएका कुमार पौडेल को हुन्? यस्तो छ घटनाको इतिवृत्त
21st October 2019, 07:34 pm | ४ कात्तिक २०७६
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका वडा नम्बर १ र १० लाई एउटा कच्ची सडकले छुट्याउँछ। लखनदेही खोलाबाट पूर्वतर्फ करिब ५ सय मिटर दुरी तय गरेपछि पुगिने दुई वडाको साँधको यो ठाउँमा गत असार ५ गते एउटा अकल्पनीय घटना भयो। १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व सकिएको अर्को दशकपछि यहाँ भएको 'कारवाही'ले धेरैलाई झस्क्यायो। यहाँको बाँसघारीमा प्रहरीको 'कारवाही'मा कुमार पौडेल मारिए।
प्रहरीको 'इन्काउन्टर'मा मारिएका पौडेल सर्लाही वाग्मती नगरपालिका २ का स्थानीय थिए। उनको परिचय त्यतिमै सकिँदैन। उनी नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सर्लाहीका जिल्ला इन्चार्जसमेत थिए। यो बाँसघारीमा उनको हत्या भयो या मुठभेडमा मारिए अझै प्रष्ट खुलेको छैन। दुई दशक अघिको जनयुद्धताका भएका 'हत्या' जस्तै लाग्ने यो घटनाले देशलाई त्यतिखेर तरंगित पार्‍यो जतिखेर प्रहरीले मुठभेडमा मृत्यु भएको दाबी गरिरहँदा सत्तारुढ दलकै नेता जनार्दन शर्माले 'प्रहरीले कुमारको हत्या गरेको' अभिव्यक्ति संसदमै दिए।
यति चाहीं पक्का हो २०३० साल मंसिर २३ गते जन्मिएका कुमार पौडेलको मृत्यु प्रहरीकै गोलीबाट भयो। अन्योल चाहिँ - त्यो नियोजित हत्या थियो, या अप्रत्यासित मुठभेड भन्नेमात्र हो।
आखिर को हुन् त कुमार पौडेल?
प्रतिबन्धित नेकपाका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको राजनीतिक पहिचान भने २०६२/०६३ सालको आन्दोलनपछि भएको हो। सुकुम्बासी समस्या समाधानको नारासहित सर्लाही जिल्लामा प्रभावशाली नेताका रुपमा उनी स्थापित हुँदै थिए। तत्कालीन नेकपा एमालेको युवा संगठन प्रजातान्त्रिक युवा संघमा जोडिए। तर भूमिगत रुपमा भने उनको नाता माओवादीसँग पनि बराबरी नै थियो। फेरि चुरेभावर पार्टीमा खुल्लमखुल्ला रुपमा देखिए।
लोकतन्त्र स्थापनापछि तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका कारण चुरे तथा भावर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पहाडी मूलका बासिन्दा तथा आदिवासी थारु समुदायले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अभियान नै छेडेका थिए। मध्य तराईको महेन्द्र राजमार्गदेखि दक्षिण पाँच किलोमिटरसम्म र राजमार्गबाट उत्तरको चुरे पहाडसम्म छुट्टै चुरेभावर प्रदेशको माग गर्दै आन्दोलनसमेत चल्यो। त्यसबाट प्रभावित भएर उनी पनि आन्दोलनमा जोडिए। त्यसअघि उनी तत्कालीन माओवादीले बनाएको गाउँ जनसरकार प्रमुख रहिसकेका थिए।
'गरिब किसानको पक्षमा लाग्ने केटो हो। देशलाई माया गर्ने मान्छे हो। गरिबको हित हुनुपर्छ। सुकुम्बासीले जग्गा पाउनुपर्छ भन्थ्यो', कुमारका ७२ वर्षीय बाबु खिलकराज पौडेलले सम्झिए, 'बुबा म चुरेभावरको जिल्ला अध्यक्ष बनेँ भन्दै आयो। मैले छोरा यो गल्ती गरिस्, राजनीतिको पछि लाग्नु हुन्न भनेँ। मधेशी पहाडीको नारा लगाएर नहिँड पनि भनेको थिएँ।'कुमारका बाबु खिलकराज
मधेश आन्दोलन तराईका जिल्लाहरु (हालको प्रदेश नम्बर २ का जिल्ला)मा पहाडी मूलका नागरिक त्रासमा थिए। त्यस्तैमा राजमार्ग आसपास चुरेभावरको सक्रियता बढ्यो।
'यही पार्टीले नै हाम्रो रक्षा गर्छ। सुकुम्बासीको व्यवस्था गर्छ भन्थ्यो', खिलकराजले भने।
२०५३ सालमा कुमारले केही अवधि सर्लाहीकै कालिन्जोर गाविसमा प्राविधिक सहायकका रुपमा पनि काम गरेका थिए। उनका बूढा मावली खलकका टीकाजंग थापा पुराना पञ्च थिए। कमल थापा (राप्रपा अध्यक्ष) स्थानीय विकासमन्त्री हुँदा टीकाजंगकै पहलमा उनले यो जागिर पाएका थिए। तर धेरै टिक्न सकेनन्। गाविस अध्यक्षसँगको विवादपछि उनले जागिर छाडे र राजनीतितिर लागे।
त्यसपछि उनी एमालेको प्रजातान्त्रिक युवा संघ (पछि युवा संघ नेपाल)मा जोडिए। एमालेमा पसेसँगै उनले केही समय ढुंग्रेखोला गाविसमा जागिर खाए। तर त्यहाँ पनि टिकेनन्। ढुंग्रेखोला गाविसका अध्यक्षसँग पनि उनको कुरो मिलेन। जागिर छाडे। त्यतिखेर सुकुम्बासीका अधिकारको माग उठाइरहेको थियो, माओवादीले। सुरुमा एमालेकै आवरणमा उनले माओवादीलाई सहयोग गर्दै आएका थिए। त्यसैको पुरस्कारस्वरुप २०६० सालमा उनलाई माओवादीले गाविसको जनसरकार प्रमुख नै बनाइदियो।
राजनीतिमा लागेका उनी स्नातक तहमा भर्ना त भए तर पढाइ पूरा गर्न सकेनन्। २०७० सालमा सर्लाहीकै हरिवनको चतुर्भुजेश्वर बहुमुखी क्याम्पसमा उनी भर्ना भएका थिए।
'राजनीतिमा अगाडि बढिसक्नुभएको थियो। राजनीतिमा लागेको मान्छे अलिअलि सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ भर्ना हुनुस् भनेर मैले नै भर्ना गराइदिएको हुँ', त्यतिबेला विद्यार्थी राजनीतिमा रहेका एक स्थानीयले सुनाए, 'म दोस्रो वर्ष हुँदा पहिलो वर्षमा भर्ना हुनुभएको हो। पहिलो वर्षको परीक्षा दिनुभयो। त्यसपछि दिनुभएन।'
२०६३ सालमा चुरेभावर पार्टीमा प्रवेश गरे पनि सुरुदेखि नै उनी र पार्टी नेतृत्वबीच खटपट भइरह्यो। चुरेभावर पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबु थापा र उनको समूहबीच पार्टी संयोजकको विषयमा 'खुकुरी हानाहान' नै भएको थियो। थापा समूहले उनलाई सर्लाहीकै वाग्मती पुलमा आक्रमण गरेका थिए। र, त्यसको भोलिपल्टै थापामाथि पौडेल समूहले आक्रमण गरेको सर्लाहीका एक पुराना पत्रकारले पहिलोपोस्टसँग भने। त्यतिबेला पौडेलले प्रहरीको बन्दुकसमेत खोसेका थिए।
यी सबै भइरहँदा स्थानीयबीच भने कुमार चर्चित बनिसकेका थिए। २०४५ साल चैत १ गते स्थापना भएको सागरनाथ वन विकास परियोजनाको अतिक्रमित जमिनमा बस्दै आएका हजारौँ सुकुम्बासीका लागि उनी अभिभावक जस्तै बनिसकेका थिए।
सर्लाही, रौतहट तथा महोत्तरीलगायत जिल्लामा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजना पूर्व-पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण, पूर्वमा भव्सी खोला र पश्चिममा वाग्मती नदी बीचमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्र हो। सरकारले यो अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउन पटकपटक प्रयास गर्दै आएको छ। त्यसलाई पौडेलको नेतृत्वसहितको टोलीले असफल बनाइरह्यो।
सुकुम्वासीको समस्या सम्बोधन गर्न भन्दै चुरेभावर पार्टी प्रवेश गरेका उनले सानो पार्टीमा लागेर समस्या समाधान नहुने ठाने। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा यो क्षेत्र फेरि खाली गराउने प्रयास भयो। त्यतिखेर वनमन्त्री थिए अग्नि सापकोटा र गृहमन्त्री थिए शक्ति बस्नेत। उनीहरुकै निर्देशनमा सुकुम्बासी हटाउन प्रहरी परिचालन भयो। त्यसको कडा विरोधमा उत्रियो मोहन वैद्य समूह। वैद्यले त्यतिखेर पार्टी फुटाइसकेका थिएनन्। पार्टीभित्रैबाट जन्मेको क्रान्तिकारी धारले सुकुम्बासीको पक्षमा वकालत गरेपछि पौडेल वैद्यतिर खिचिए। २०६८ माघ ७ गते तत्कालीन एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (हाल नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी) नेता सीपी गजुरेलले उनलाई सिन्धुलीमा पार्टी प्रवेश गराए। योसँगै उनी केही समय एमाओवादीको सर्लाही जिल्ला सदस्यका रुपमा खटिए।
२०६९ सालमा मोहन वैद्यले पार्टीमा विद्रोह गर्दै नेकपा-माओवादी गठन गरे। पौडेल पनि वैद्यकै समूहमा लागे। उनी सर्लाहीको जिल्ला सदस्य भए। त्यस्तै सोही पार्टीको युवा संगठन राष्ट्रिय युवा जनस्वयंसेवक संघको जिल्ला अध्यक्षको जिम्मेवारी मिल्यो उनलाई।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गर्ने अभियानमा उनी सक्रिय थिए। २०७१ साल मंसिरमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादी फुटाएर अर्को दल नेकपा माओवादी गठन गरे। कुमार पनि विप्लवसँगै लागे। विप्लवको नयाँ पार्टीको जिल्ला सेक्रेटरी भए उनी। यसअघि नै सर्लाहीमा उनको राजनीतिक दबदबा चाहीं सुरु भइसकेको थियो।
विप्लवले पार्टीको नाम परिवर्तन गरी पछिल्लो समय नेकपा बनाएपछि उनले सर्लाही जिल्ला इन्चार्जको भूमिका पाएका थिए। त्यहाँ पनि उनले आफ्नो भूमिका सुकुम्बासी मुद्दामा केन्द्रित गर्दै लगेका थिए। २०७३ सालमा सागरनाथ परियोजनाले त्यहाँको अतिक्रमित बस्तीमा लगाइएको मकै बाली नष्ट गर्‍यो। त्यसविरुद्ध पौडेलकै नेतृत्वमा प्रतिकार भयो। त्यो घटनाले कुमारको राजनीतिक कदलाई केन्द्रसम्मै पुर्‍यायो।
यस्ता छन् पौडेलविरुद्धका अभियोग
पौडेलविरुद्ध वन मुद्दा चलिरहेको थियो। मूर्तिया क्षेत्रको वन मासेर बस्ती बसालेको अभियोगमा पौडेलविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०७२ मै ७५ करोड बिगोसहितको मुद्दा परेको थियो। त्यस्तै, उनीमाथि जिल्ला वन कार्यालय सर्लाहीले पटकपटक वारेन्ट जारी गरेको थियो। यी सबै घटनाले उनलाई अर्धभूमिगत राजनीतितिर धकेलिरहेको थियो।
गत वर्ष फागुनयता उनी परिवारबाट पनि टाढै रहे। 'फागुनयता भेट भएको थिएन। फागुनमा आएको थियो', कुमारका बाबु खिलकराजले भने, 'ठीक छु भन्ने खबर आउँथ्यो। कहिलेकाहीँ घरमा भाइ र बुहारी (कुमारकी पत्नी) लाई फोन गर्थ्यो।'
उनी पछिल्लो समय सार्वजनिक रुपमा देखिएका थिएनन्।
'उहाँसँग भेट नभएको धेरै भएको थियो। गत वर्ष हो एक पटक लालबन्दी बजारमा भेट भएको। मोटरसाइकलमा मास्क र हेल्मेट लगाएका थिए। हेल्मेट खोल्न पनि मानेका थिएनन्', एक स्थानीय पत्रकारले भने, 'दाइ जोखिम छ हेलमेट खोल्न नभन्नुस् न भनेका थिए।'
प्रहरी प्रशासन उनीविरुद्ध कडा रुपमा परिचालन भएको थियो। त्यसको उदाहरण हो संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले दिएको विवरण। २०७२ सालमा सागरनाथ र परवानीपुर सामुदायिक वनबाट बाटो मासी अवैध रुपमा काठ बेचबिखन गरेको अभियोगमा जिल्ला वन कार्यालयले उनीविरुद्ध मुद्दा हालेको प्रहरी महानिरीक्षक खनालले बताएका थिए।
कुमारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न उक्साउने, प्रेरित गर्ने र खाली ठाउँमा ल्याई बसोबास गराउने गरेको तथा त्यसरी ल्याइएका व्यक्तिबाट आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप खनालले लगाएका थिए।
खनालको दाबीलाई नै मान्ने हो भने पछिल्ला महिनाहरुमा जबरजस्ती चन्दा संकलन गरी व्यापारी, व्यवसायी, जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणलाई आर्थिक शोषण गर्न र आतंकित बनाउन उनी सक्रिय थिए।
त्यस्तै गाउँपालिकाका र नगरपालिकाका मेयर, वडाध्यक्षहरुसँग कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ चन्दा नदिए भौतिक कारवाही गर्ने चेतावनी पौडेलले दिँदै आएको महानिरीक्षक खनालको दाबी छ।
यतिमात्र होइन, उनीमाथि २०७३ साउन ७ गते हरिवन नगरपालिका वडा नम्बर १० स्थित लु २ त ६६१९ नम्बरको ट्याक्टरमा आगजनी गरेको, २०७४ जेठ ११ गते वाग्मती नगरपालिका वडा नं ३ स्थित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको कम्पाउन्डमा पाइप बम राखेको अभियोग पनि छ।
उनीविरुद्ध २०७५ असार २९ गते परियोजनाको अतिक्रमित ६ सय हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्दा प्रेसर कुकर बम पड्काएर अवरोध गरेको तथा २०७५ चैत २६ हरिवनपुर नगरपालिका वडानम्बर ८ स्थित एनसेलको टावरमा आगजनी गरेको मुद्दा पनि छ।
त्यस्तै, २०७६ वैशाख २३ गते वाग्मती नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित वाग्मती खोलामा सविन्द्रकुमार श्रेष्ठले सञ्चालन गरेको बा १ क ७८४७ नम्बरको स्काभेटरमा आगजनी गरेको अभियोग पनि उनीमाथि लागेको थियो।
काठमाडौं : सर्लाहीको लालबन्दीमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका जिल्ला इञ्चार्ज कुमार पौडेलको गोली लागी मृत्यु भयो। उनको मृत्युको विषयलाई लिएर संसद अवरुद्धसमेत भयो। तर, प्रहरीको विवादित इन्काउन्टरको यो घटनालाई सकेसम्म सामसुम पारिँदैछ।
सुकुम्बासीको पक्षमा आफ्नो राजनीति केन्द्रित गरेका पौडेल प्रहरीको गोलीको सिकार भए। तर, उनको मृत्यु विप्लवसँगको प्रतिशोधमात्रै थियो त? घटनासँग अनेक पहेली जोडिएका छन्। तीमध्ये एक हो - सागरनाथ वन विकास परियोजना।
पौडेलको राजनीतिक करियर र उनको उचाइसँग जोडिएको एउटा परियोजना थियो यो। सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी क्षेत्रमा फैलिएको यस परियोजनासँगको टकरावसँगै कुमार पौडेलको राजनीतिक उचाइ चुलिँदै गएको थियो।
परियोजना क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेका सुकुम्बासीहरुको नेतृत्व गर्दै आएका कुमार पौडेलको सर्लाहीमै प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो। उनको मृत्युको विषय अझै रहस्यको गर्भमा नै छ।
के हो सागरनाथ परियोजना?
सर्लाहीका स्थानीयले सागरनाथ र परियोजना भनेर बुझ्ने परियोजनाको नाम हो सागरनाथ वन विकास परियोजना। २०३५ सालमा स्थापना भएर २०४५ सालमा परियोजनाको रुपमा अगाडि बढेको हो, सागरनाथ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा १३ हजार ५१२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो परियोजनाको कूल क्षेत्रफल मध्ये १० हजार ४ सय ४७ हेक्टर क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गरिएको वन पैदावार विकास समितिले जनाएको छ।
'वन पैदावारको आपूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउन, स्थानीय ग्रामिण जनसमुदायका लागि रोजगारीको अधिकतम अवसर पैदा गर्न र वन व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान, सीप तथा प्रविधिको विकास गर्न एशियाली विकास वैकको ऋण सहायताबाट स्थापना गरिएको परियोजना हो,' समितिका प्रवक्ता उप सचिव जितेन्द्र कर्माचार्यले परियोजनाको व्याख्या गरे।
सागरनाथ परियोजना अन्तर्गत वन क्षेत्रमा वृक्षारोपणका लागि एडीबीले २०३५ साल देखि २०४८ साल सम्म ३८ लाख ८ हजार २ सय ३८ अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। त्यस्तै ओपेक फन्डबाट १६ लाख ९३ जहार ७ सय ६० अमेरिकी डलर २०३५ देखि २०४३ को बीचमा खर्च भएको छ।
यो परियोजनाले हाल प्रत्येक वर्ष करिब ५ करोडको हाराहारीमा नेपाल सरकारलाई राजश्व बुझाउँदै आएको वन पैदावार विकास समितिका प्रवक्ता कर्मचार्यको दाबी छ।
अतिक्रमित बस्ती र कुमार पौडेल कनेक्सन
सागरनाथ परियोजना भित्र पटक पटक अतिक्रमित बस्ती हटाउने क्रममा सरकार र स्थानीयबीच झडप हुँदै आएको छ। गत वर्ष मात्र सागरनाथ परियोजनाभित्र अतिक्रमण गरी बनाइएका नयाँ ५३ वटा घर टहरा सरकारले हटाएको थियो।
वाग्मती नगरपालिका-२, धरहर क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि अतिक्रम गरेर बनाएका त्यस्ता घर टहरालाई सागरनाथ वन विकास परियोजना, डिभिजन वन कार्यालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त टोली हटाएको थियो। यो क्षेत्र कुमार पौडेलको गाउँ हो।
सागरनाथ वन विकास परियोजनाको खाली रहेको १२ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा स्थानीयले खेती गर्दै आएका छन्।
यसै क्षेत्रमा २०७३ साल असारमा पनि अतिक्रमित क्षेत्र हटाउने क्रममा प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो। पाक्न थालेका मकैका बोटहरु परियोजना कर्मचारीहरु पुगेर ट्याक्टर चलाएर फाँड्न थालेपछि अतिक्रमण गरेर बसेका स्थानीयले प्रतिकार गरेका थिए। ६० विगाहामा लगाइएको मकै उखुलगायतका बालीमा परियोजनाले प्रहरीको सहयोगमा ट्याक्टर कुदाएको थियो। सो क्षेत्र कुमार पौडेलको घर नजिकैको क्षेत्र हो। अहिले यहाँ मसलाका रुखहरु हुर्किसकेका छन्। प्रहरीले करिब ५० राउण्ड टियर ग्यास र प्लाष्टिकका गोली प्रहार गरेको थियो यहाँ। स्थानीयले प्रहरीमाथि गुलेली हानेका थिए।
यहाँ चलेको आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए कुमार पौडेलले। एमाले, माओवादी, चुरे भावर, एमाओवादी वैद्य माओवादी हुँदै विप्लवको जिल्ला नेतृत्वमा पुगेका पौडेल सुकुम्बासीका पक्षमा उभिए, अतिक्रमण हटाउन खोज्ने सरकारी पक्षको विरोधमा।
विप्लव नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा माओवादी हालको नेकपाले यसै क्षेत्रमा आमसभा समेत गरेको थियो। कार्यक्रममा विप्लव नेतृत्वका पार्टीका ओम पुन पुगेर सुकुम्बासीको पक्षमा प्रतिवद्धता जनाए। असारमा भएको ट्याक्टर काण्डको विरोधमा विप्लव समूहले साउनमा नेपाल बन्दको आयोजना गरेको थियो।
सागरनाथ परियोजना अन्तर्गतका बस्तीमा २०६२ देखि २०६५ सम्म सबैभन्दा बढी अतिक्रमण भएको थियो। यस अवधिमा मूर्तिया क्षेत्रको २५ हेक्टर जमिन मासियो। यसका लागि स्थानीय राजनीतिक दलका कार्यकर्ता, परियोजनाका कर्मचारीको समेत मिलेमतो रहेको बताइन्छ।
त्यस अगाडि परियोजनाकै जमिनमा सरकारले बाढी पीडितहरुलाई ल्याएर बसोबास गराएको थियो। २०६२/०६३ सालपछि तत्कालीन माओवादीले यस परियोजना क्षेत्रमा आफ्ना पूर्व लडाकु तथा कार्यकर्तालाई ल्याएर समेत राखेको थियो। यसबीच यहाँ सरकारले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउँदा विरोधमा उत्रिनेमा माओवादी नेतृत्व नै थियो।
२०७३ सालमा सागरनाथमा ट्याक्टर चलाइँदै माओवादी नेता शक्ति बस्नेत गृहमन्त्री थिए। अग्नि सापकोटा वन मन्त्री थिए। त्यतिबेलाका गृहमन्त्री अहिले वन मन्त्री छन्। गृह मन्त्रीमा माओवादी नेता हालका ने क पाका सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा छन्।
तत्कालीन गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत र वन मन्त्री अग्नि सापकोटाको ठाडो निर्देशनमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमण गरिएको जमिनमा लगाइएको बाली नस्ट गरिएको थियो।
दलको दलदलमा सागरनाथ
पंचायतकालमा अस्ट्रेलियन सरकारले बिरुवा परीक्षणका लागि भनेर २० प्रजातिका बिरुवा वृक्षारोपण गर्नका लागि नेपाललाई दिएको थियो। परियोजनाका रुपमा दिइएको सहयोगमा सागरनाथ क्षेत्रमा बिरुवा रोप्न थालिएको हो। यसअघि त्यहाँ रहेका सालका रुखहरु टिम्बर कर्पोरेसन (टिसीएन)ले काटेर बिक्री गरेको थियो।
पञ्चायतमा यहाँ 'पञ्चे'हरुको हालिमुहाली थियो। यहाँ उत्पादन हुने काठमा उनीहरुकै रजाइँ थियो। बहुदल आएपछि यसमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु भागवन्डामा बसे। परियोजना अन्तर्गत कर्मचारी नियुक्ति समेत भागबन्डाका आधारमा गरिन थालियो।
माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि यहाँ तस्करहरुले वन फँडानी र तस्करी बढाए। 'परियोजनाकै कर्मचारीको मिलेमतोमा तस्करी बढ्यो। राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरु पनि यसमा लागे,' ने क पा सर्लाहीका एक जिल्ला नेताले भने, 'परियोजनाले पनि विभिन्न बाहनामा खेतीका लागि जमिन वितरण गरेको थियो। यहाँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु विभिन्न जिल्लाबाट आएर बस्न थालेका हुन्। अतिक्रमणलाई सुरुमा परियोजना र राजनीतिक दलहरुले नै प्रोत्सहान गरेका हुन्।'
परियोजनाले २०५६ देखि २०५८ सालसम्म वार्षिक दस्तुर लिएर घोषित रुपमै 'टाँगिया खेती'को नाममा जमिन वितरण गरेको थियो। त्यसपछि यहाँ जमिनको बिक्री वितरण सुरु भयो। 'टाँगिया खेतीको रुपमा प्रयोग गर्न दिइएको जमिन ऐलानी जग्गाको रुपमा कर्मचारी र दलालहरु मिलेर बिक्री वितरण गर्न थाले। त्यसपछि बाहिरबाट आउने क्रम र सस्तोमा जग्गा किनबेच हुनेक्रम बढ्दै गयो,' ती नेताले पहिलोपोस्टसँग भने।
त्यतिबेला जमिन बिक्री वितरण गर्ने क्रम बढेपछि स्थानीयले टाँगिया खेती संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन समेत गरेको उनी सम्झिन्छन्। त्यस्तै २०६० सालदेखि विभिन्न नाममा यहाँका किसानहरु आन्दोलन गर्दै आएका थिए। २०६५ सालमा माघमा कुमार पौडेलको नेतृत्वमा छरिएर रहेका संघर्ष समितिहरु एक भएर आन्दोलन सुरु गरे। २०६५ माघ २७ गते जनमुखी भू हक मूल संघर्ष समिति बनेको थियो। त्यसको नेतृत्व पौडेलले गरेका थिए।
पटक पटक भएका संघर्षपछिका वार्ताले विभिन्न सहमतिहरु पनि भए। २०६६ साल फागुन २४ गते २८ हेक्टर जमिनको पाकेको बाली नष्ट गरिएको थियो। २५ गते कुमार पौडेलकै नेतृत्वमा आन्दोलन भएको थियो। त्यतिबेला प्रहरीले गोली र अश्रुग्याँस चलाएको थियो।
त्यसपछि चैतमा सिन्धुलीमा वार्ता भएको थियो। वार्तामा संघर्ष समितिको नेतृत्व पौडेलले नै गरेका थिए। परियोजनाका तर्फबाट तत्कालीन परियोजना प्रमुख जीवन कुमार ठाकुर, उप सचिवहरु तीर्थराज चन्द र बिनोदकृष्ण मानन्धर लगायत थिए। यो वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको थियो।
वार्तामा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने, टाँगिया बस्ती निर्माण गर्ने, परियोजनामा आश्रित विपन्नहरुको जिविकोपार्जनको व्यवस्था गर्ने, जनसहभागिता र लाभांशमा बाँडफाँड गर्ने र आन्दोलनमा घाइते भएकालाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएका थिए।
ती सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्न पौडेल लागिपरेको उनका बाबु खिलकराज बताउँछन्।
'सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्छ। भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न लड्न पर्छ भन्थ्यो। यहाँका गाउँलेलाई निरास नहुन भन्थ्यो,' खिलकराज सम्झिन्छन्, 'सहमति कार्यान्वयन होस् भन्दै पटकपटक मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि भेट गर्‍यो। तर सहमति कार्यान्वयनमा आएन।'
तर, सागरनाथ परियोजनाका प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठी भने यसअघिका प्रमुख र पौडेलबीच नेतृत्वको वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिको बारेमा जानकारी नभएको र अतिक्रमित क्षेत्र खाली गरेरै छाड्ने बताउँछन्। 'नियमले बनेका सबै घरहरु पनि भत्किन्छन्। हामीले भत्काउँछौँ,' उनले भने।
केन्द्र र प्रदेशको किचलो उस्तै
परियोजना भित्र हुने आम्दानीले परियोजना माथि केन्द्र र स्थानीय सरकार तथा राजनीतिक नेतृत्वले आँखा लगाउँदै आएका छन्।
यसबीच २ नम्बर प्रदेशले केन्द्र (संघ) मातहत सञ्चालित सागरनाथ वन विकास परियोजना खोसेर आफूमातहत ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको थियो।
२ नम्बर प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायको ठाडो प्रस्तावमा फागुन २४ मा बसेको प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नम्बर १९ अनुसार राष्ट्रिय वन प्रदेशअन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको भन्दै प्रदेशअन्तर्गत राखेर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो।
तर, संघीय सरकारले भने केन्द्र सरकार अन्तर्गतको परियोजना भएको भन्दै केन्द्र मातहत नै राख्ने निर्णय गरेको छ। संघीय सरकारले पनि सागरनाथ सहित झापाको रतुवामाइ विकास परियोजनालाई केन्द्र मातहतमै राख्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच सरकारले वन निगम बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। गत वर्ष मन्त्रिपरिषदको साउन १८ गते बसेको बैठकले वन पैदावार विकास समिति र टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टीसीएन) गाभेर वन निगम बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सागरनाथ परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले परियोजना केन्द्र मातहत रहेको भन्दै केन्द्रको निर्णय मान्ने बताउँछन्। 'मैले पनि सुनेको हुँ, प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको विषयमा हामीले त केन्द्रले जे भन्छ जे निर्णय गर्छ त्यही मान्ने हो,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने।
द्वन्द्व बढाउने परियोजनामा कति छ अतिक्रमण?
परियोजनाले लामो समयदेखि परियोजना अतिक्रमण हटाउने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म पूर्ण रुपमा अतिक्रमण हटाउन भने सकेको छैन। यस क्षेत्रको ६५० हेक्टर बराबरको जमिन अतिक्रमण भएको प्रवक्ता कर्माचार्यले जानकारी दिए। यस यसअघि २१ सय घरधुरी अतिक्रमण गरी बसेको भए पनि हाल त्यो बढेर ३५ सयको हाराहारीमा पुगेको हुन सक्ने समितिका उनले बताए। तर, एकिन तथ्यांक भने वन पैदावार समितिसँग छैन न त यही समिति अन्तर्गत रहेको सागरनाथ परियोजनासँग नै छ।
यो परियोजना अन्तर्गत राजघाट, ढुङग्रेखोला, घुरकौली, कर्मैया, मूर्तिया, हरिपुर, शंकरपुर, हरिवन र जानकिनगरलगायतका क्षेत्रहरुमा अतिक्रमण बढेको छ। २०६६ को तथ्यांकमा २०५० सालका ४ सय १२ घरधुरी बाढीपीडित यस क्षेत्रमा बसालिएको थियो। त्यस्तै २०५२ देखि २०६५ सम्म थपिएका घर परिवारको संख्या ८ सय रहेको थियो। २०६६ पछिको फडानीमा बसेका घर परिवार लगभग १५ सय गरी जम्मा २ हजा ७१२ घरपरिवार रहेको परियोजनाको तथ्यांकमा उल्लेख छ। त्यो संख्या बढेर हाल करिब ४ हजारको हाराहारीमा पुगेको बताइन्छ।
वन पैदावर विकास समितिका प्रवक्ता कर्माचार्य
'हामीले घर छाडेर तारवार गरेर वृक्षारोपण गर्न थालेका छौँ,' प्रवक्ता कर्मचार्यले भने, 'खेती भइरहेको जमिनमा पनि वृक्षारोपण गरेका छौँ। खेती भएका क्षेत्र खाली गराउँछौँ। घरहरु हटाउन समस्या छ।'
अतिक्रमित जमिन खाली गराउन राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले बताए।
'राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो स्वार्थका लागि उनीहरुसँग एउटा प्रतिबद्धता गर्दै आएका छन्। अतिक्रमण जमिन खाली गराउनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता छ,' उनले भने, 'राजनीतिक प्रतिबद्धतासहित अतिक्रमण क्षेत्रमा बसोबास गरेका मानिसहरुलाई स्थानान्तरण गर्न आवश्यक छ।'
परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया क्षेत्रमा विगत १८ वर्ष देखि बस्दै आएका हरि परियारका अनुसार यसबीच भएका चुनावमा उम्मेद्वारहरुले कसैले पाँच पाँच कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउने पूर्जी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि पूरा गरेनन्।
'चुनावमा मेयरले पनि पाँच कठ्ठा जमिन दिलाइदिन्छु भनेर मत मागेका थिए,' उनले भने, 'अहिले खाली गराउन खोज्दैछन्।'
समितिका प्रवक्ता कर्माचार्यले भित्रभित्रै अतिक्रमित जग्गालाई स्थानीय नेताले अस्थायी पूर्जी उपलब्ध गराएको र भित्रभित्रै किनबेच हुने गरेको समेत बताए।
सागरनाथ विकास परियोजनाका परियोजना प्रमुख देवेशमणि त्रिपाठीले सागरनाथको अतिक्रमित सबै क्षेत्र खाली गरिने बताए।
'पहिले ३५ सय हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा अतिक्रमण थियो। हामीले त्यसलाई खाली गराएर २२ सय हेक्टरमा झारेका छौँ,' उनले भने, 'यस वर्ष पनि हामीले एक हजार हेक्टर हाम्रो कब्जामा लिइसकेका छौँ। बाँकीमा पनि काम थाल्छौँ।'
उनले परियोजना अन्तगर्तको सबै क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्नका लागि बजेट अभाव भएको समेत बताए।
अतिक्रमित जमिनमा गरिएको मकैखेतीभित्र परियोजनाले लगाएका विरुवा।
'हामीलाई पूरै २२ सय हेक्टरमा वृक्षारोपण गर्नका लागि ३० देखि ३१ लाखसम्म बिरुवा आवश्यक पर्छ। हामीसँग भएका बिरुवा हामीले वृक्षारोपण गरेका छौँ,' उनले भने, 'हामीले अन्य सहयोग आयो भने हामी सबैमा वृक्षारोपण गर्छौँ। त्यसका लागि सबै जिल्ला वन कार्यालय, प्रदेश सरकारसँग पनि विरुवाका लागि माग गरेका छौँ। उहाँहरुले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विरुवा प्राप्त हुनासाथ फेरि वृक्षारोपणलाई अगाडि बढाउँछौँ।'
सरकारको दोधारे नीति
यता सरकारले अतिक्रमित बस्तीलाई खाली गरेर वृक्षारोपण गर्ने भन्दै लागि परेको छ। सागरनाथ परियोजनाले खेती भइरहेका जमिनमा खेती मास्दै वृक्षारोपण गर्दैछ। अर्कोतिर सरकारले यही परियोजना अन्तर्गतको वन क्षेत्र मासेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अनुसार सर्लाहीको सागरनाथमा पनि औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रस्ताव बढाएको छ।
तीन हजार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने यो औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वमा लखनदेवी खोला रहनेछ। यस्तै पश्चिममा वाग्मती नदी रहनेछ भने उत्तरमा महेन्द्र राजमार्गलाई छुनेछ। अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार दक्षिणको सागरनाथ मन्दिर परिसरको जग्गा समेत यस औद्योगिक क्षेत्रमा पर्नेछ।
लखनदेही खोला त्यही खोला हो जसको करिब ५ सय मिटर पूर्वतिर सडक किनारमा कुमार पौडेल मारिएका थिए।
पौडेलले लगाएको नारा 'जसको जोत उसको पोत'ले नै उनलाई स्थानीय 'सुकुम्बासी'का माझ हिरो सावित भए, परियोजना, अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्ने सरकारका लागि बाधक 'भिलेन' सावित भए।
असार ५ गतेको ती दुई कल: सञ्चै छु भनेको ४ घन्टामा मृत्युको सन्देश
असार ५ गते मध्याह्न। खाना खाएर यसो ढल्किएकी थिइन् धनकुमारी पौडेल। नयाँ नम्बरबाट आएको फोनको धुनले उनलाई ब्युँझायो। फोन उठाइन्।
'के छ? सन्चै छौ? भुराभुरी के गर्दैछन्?'
नयाँ नम्बरबाट फोन आए पनि आवाज परिचित नै थियो।
कुमारले गरेका रहेछन्।
'खाना खाएर यसो ढल्किएकी थिएँ। फोन आयो, भुराभुरीलाई कस्तो छ? के गर्दैछन्? भनेर सोध्नुभयो, 'धनकुमारीले सुनाइन्, 'धेरै कुरा भएको होइन, सन्चो बिसन्चोको मात्र कुरा भयो। ठीक छु भन्नु भएको थियो। अनि फोन राख्नुभयो।'
त्यतिबेला कुमार कहाँ छन् भन्ने उनलाई थाहा थिएन। न त उनले नै सोधिन् - 'कहाँ हुनुहुन्छ?'
धनकुमारीलाई थाहा थियो - कुमारले यहाँ छु भन्दैनन्।
'सुरक्षाको कुरा हो। मैले कहिले पनि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधिनँ। उहाँले पनि भन्नु भएन, 'उनले भनिन्, 'फोन राख्नुभयो। म घरधन्दामा लागेँ।'
लामो समयदेखि कुमार घर गएका थिएनन्। धनकुमारीका लागि उनको अनवरत अनुपस्थिति नौलो थिएन पनि। धनकुमारीलाई आफ्ना श्रीमानसँग कुरा गर्नका लागि यसैगरी फोन कुर्नुपर्थ्यो। उनले कुमारलाई फोन गर्दिनथिन्।
त्यसै दिन ४ बजे फेरि अर्को कल आयो। धनकुमारीले फोन उठाइन्। यसपाला फोनमा बोल्ने परिचित थिएनन्। १२ बजे आएको कलमा ठीकै छु भन्ने कुमार अब रहेनन् भन्ने खबर थियो, दोस्रो कलमा। धनकुमारी एकाएक अर्धचेत अवस्थामा पुगिन्।
कुमारले जतिखेर घरमा आफ्नी श्रीमतीलाई फोन गरेका थिए, त्यही समयको आसपासमा लालबन्दी १ सर्लाहीका अजित यादव आफ्नो खेतबाट काम गरेर घर फर्किएका थिए। यो त्यही खेत हो जहाँ हामी घटनाको १७ दिनपछि पुग्दा पनि अजित उनकी श्रीमतीसहित काम गरिरहेका थिए।
कुमार पौडेलको मृत्यु भएको स्थान नै उनको खेत हो। घटना भएको दिन समाचारहरुमा लखनदेही खोलामा मृत्यु भन्ने समाचार आएका थिए। वास्तवमा घटनास्थल खोला नभइ खोलादेखि पूर्वतर्फ ५०० मिटरभन्दा बढीको दुरीको लखनदेहीस्थित जंगलको छेउमा रहेको बाटोको अर्को किनार बाँसको झाडीसहितको खेत हो।
यो बाँसको झाडी र खेतका मालिक हुन् अजित यादव। त्यस दिन बिहानैदेखि अजित खेतमा आफ्नी श्रीमतीसहित खेतालासँग काम गरेर बसेका थिए।
'त्यो दिन हामी बिहानभर यहीँ काम गरेर फर्किएका थियौँ,' उनले घटनास्थल देखाउँदै भने, 'बिहानको प्रहर काम सकेर फेरि साँझ फर्किने भन्दै काम गर्नेहरुलाई बिदा गरेर घर गएको थिएँ।'
तर, साँझको प्रहरमा खेतमा काम गर्न भने जान पाएनन्।
'खेतमा जान नपाएपछि लालबन्दी बजार गएको थिएँ। साथीले फोन गरेर तिम्रो खेतमा त मान्छे मारेको छ रे भन्यो। यहाँसम्म आउन चाहिँ पुलिसले दिएन, 'उनले भने, 'पछि आएको थिएँ। केही रगत मात्र थियो। रगत चाहिँ माटोले छोपिदिएँ।'
प्रहरी गइसकेपछि मात्र उनी घटनास्थल पुगेका थिए। दिउँसाे २:३० सम्म त प्रहरीले शव लिएर गइसकेको थियो।
जुन ठाउँमा कुमारको मृत्यु भयो त्यहाँ बाँस काटिएको देखिन्थ्यो।
'बाँस थाँक्रा बनाउनका लागि मैले नै काटेको हुँ,' उनले भने। रगतलाई माटोले पुरे पनि उनलाई मारिएका व्यक्ति कुमार पौडेल नै हुन् भन्ने चाहिँ पछि मात्रै थाहा भयो।
काठमाडौंका पत्रकारहरुले घटना भएको केही समयमा नै प्रहरी हेडक्वार्टरबाट घटनाको बारेमा जानकारी पाइसकेका थिए तर स्थानीय पत्रकार भने घटनाबाट पछिसम्मै बेखबर रहे।
गोली चलेको जानकारी त पाए तर यथार्थ विवरण पाउनै सकेनन्।
'घटना कहाँ भएको हो भन्ने पनि यकिन थिएन। हामी त्यही बाटो हिँडेका थियौं। तर मेसो पाएनौँ,' पत्रकार घनश्याम बलम्पाकीले भने, 'हामी यहाँ पुग्दा केही पनि थिएन। केही रगत थियो, माटोले छोपिएको।'
घटनाको दिन त्यहाँका पत्रकारहरुले गरेको कल जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख र प्रवक्ताले पनि रिसिभ गरेनन्। घटना भएको साढे पाँच घण्टापछि मात्र प्रहरीले यसबारे आधिकारिक रुपमा जानकारी दिएको थियो।
तर, ३ बज्दानबज्दै सर्लाहीमा विप्लवका कार्यकर्ता र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको समाचार काठमाडौंबाट सबैतिर फैलिसकेको थियो। अनलाइनहरुमा ब्रेकिङ न्युजको भीड लागिसकेको थियो - दोहोरो भीडन्तको।
असार ५ गते दिनभर पसलमा थिइन् चम्पादेवी यादव, दोहोरो भीडन्त भनिएको स्थान यहाँबाट ५ मिनेटकै दुरीमा पर्ने। यति ठूलो दोहोरो भीडन्तमा उनले गोली चलेको आवाज सुनिनन्।
'म यहीँ थिएँ। खाना खाएर ढल्किएकी। भर्खर आँखा लाग्दै थियो। एउटा लड्का आयो झक्झक्यायो,' उनले त्यो दिन सम्झिइन्, 'गाउँमा मान्छे मारिसक्यो। के सुतेर बसेको? भन्यो।'
सानो बस्तीसँगैको घुम्तीमा रहेको पसलमा रहेकी उनीमात्र होइन, गोलीको आवाज सुन्नेहरु कोही पनि भेटिएनन्।
चम्पादेवीले ती युवकलाई पनि चिनिनन् जसले उनलाई ब्युँझाए।
'खोइ त्यो मान्छे नि चिनिनँ। त्यहाँ (घटनास्थल) जाँदा मान्छे (शव) पनि थिएन्,' उनले भनिन्।
हरिण मार्न लागेको भनेर स्थानीयहरुलाई घटनास्थलतिर जान प्रहरीले रोकेको रहेछ, त्यतिखेर। काठमाडौँमा दोहोरो भीडन्त भनेर हल्ला गरे पनि प्रहरीले स्थानीय पत्रकारबीच सूचना पूरै लुकाएको थियो।
प्रहरी प्रशासनको यस्तो व्यवहारविरुद्ध पत्रकारले कडा प्रश्न पनि गरे, सामाजिक सञ्जालबाट। नागरिक दैनिकका पत्रकार टंक क्षेत्रीले फेसबुकमा लेखे -'के कुमार पौडेल दोहोरो भीडन्तमै मारिएका हुन्?'
घटना भएको दिन साँझ ७ बजे पोस्ट भएको उनको फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको छ - 'जिल्लास्थित प्रहरी नेतृत्वले स्थानीय सञ्चारकर्मीको फोन नउठाउने मात्र हैन घटना भएको झन्डै साढे ५ घण्टासम्म पत्रकारहरुलाई गुमराहमा राख्नुले शंकाको ठूलो घर देख्छु म। जाबो ३०-३५ किलो गाँजासहित अभियुक्त समातिएको घटनामा तत्काल पत्रकारहरुबीच डंका पिट्ने प्रहरी बिहीबार विप्लव समूहका सर्लाही इञ्चार्ज मारिँदा पनि साढे ५ घण्टासम्म किन चुप? त्यो पनि सामान्य इमेल पत्रबाट जानकारी, क्या काइदा!'
अरुबेला घटना हुँदा फोटोसहित इमेल गर्ने प्रहरीले यस घटनामा भने फोटोसमेत नदिएको उनले पहिलोपोस्टसित बताए।
असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी १ लखनदेही खोलादेखि करिब ५०० मिटर पूर्वतर्फ सडक किनारमा प्रहरीको गोली लागेर कुमार पौडेलको मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार उनको मृत्यु २ बजे भएको हो। फोटो : संचारकेन्द्रडटकम
नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि कुमार पौडेल घरमा पुगेका थिएनन्। तर, त्यही दिन उनले घरमा फोन गरेर सञ्चो बिसञ्चो सोधेका थिए, जुन दिन उनी मारिए।
कुमार मारिएको खबर पाएलगत्तै उनकी श्रीमती धनकुमारी अर्धमुर्छित् भइन्। कुमारका भाइ हरिकृष्ण र बुबा खिलकराज घटनास्थलतिर गए पनि त्यहाँसम्म पुगेनन्। कुमारलाई मलंगवा लगेको खबर आएपछि उनीहरु त्यतैतिर मोडिए।
सोझै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे खिलकराज र हरिकृष्ण।
'अस्पतालमा छ। यहाँ छैन,' प्रहरी कार्यालयमा यस्तै जवाफ मिल्यो।
'अस्पताल पुग्दासम्म पनि अझै सास छ भन्ने आशा थियो। पुगेपछि भने आशा हरायो,' खिलकराजले भने, 'अस्पतालभरि प्रहरी थिए। म बा हुँ कुमारको। मलाई हेर्न देऊ भन्दा पनि दिएनन्।'
असार ५ गते बिहान १० बजे कुमार पौडेल बहिनीको घरबाट खाना खाएर निस्किएका थिए।
'मामाकी छोरीकहाँ खाना खाएर निस्किएका थिए रे,' कुमारकी दिदी लक्ष्मीले भनिन्, '१२ बजेतिर मामाको घरमा चिया खाएको थियो रे। तीन जना थिए रे। अरु दुई जनालाई मामाले चिन्नु भएन।'
कुमारको घर, मामाको घर, मामाको घर र घटनास्थल पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई केन्द्रमा राखेर 'सर्कल' कोर्दा एउटै परिधिमा पर्छ।
पौडेल चिया खाएर मामासँग बिदा भएर निस्किए।
घटना हुँदा कुमारसँग कति जना थिए भन्नेमा पनि विवाद छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीले घटनाको भएको साँझ जारी गरेको वक्तव्यमा कुमारसहित चार जनाले प्रहरीलाई देखेपछि गोली चलाएको उल्लेख छ। तर, विप्लव समूहले तीन जनामात्रै भएको बताएको छ।
प्रहरीले घटनास्थलबाट तीन जना भागेको दाबी गरेको छ भने विप्लव समूहले कुमारसहित तीन जना रहेको र दुई जना आफ्नो सम्पर्कमा रहेको जनाएको छ।
'घटनाको दिन हामी दलित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रमका लागि जाँदै थियौँ। कुमारजीकै आग्रहमा उहाँको आफन्तको घरमा चिया खान पसेका थियौँ,' घटना हुँदा कुमारसँगै रहेका र हाल पार्टीको सम्पर्कमा रहेका एक कार्यकर्ताले भने, 'चिया पिउँदै थियौं एक जना अपरिचित युवा हामी भए नजिकै आए र हेरे। उनी फर्किएपछि हामीलाई शंका लाग्यो र हामी निस्कियौं।'
त्यहाँबाट निस्किए पनि उनीहरुको जम्काभेट तिनै युवकसँग भयो जसका गतिविधिले उनीहरुलाई शंका पैदा गरेको थियो।
'उहाँको आफन्तकहाँबाट निस्किएको १० मिनेट अगाडि बाँसको घारीमा पुगेर कुमारजीले पिसाब गरौँ भन्नुभयो हामीसँग दुई वटा बाइक थियो। हामी पिसाब फेर्न सडक किनारमा गएका थियौँ,' उनले भने, 'एउटा मोटरसाइकलमा दुई जना अपरिचितहरु आए। एकजनाले कुमारलाई समात्यो। अर्कोले कुमारजीलाई हतियार ताक्यो।' बन्दुक ताक्ने तिनै युवक थिए जसले कुमारहरुको 'रेकी' गरिरहेको थियो।
'कुमार तैँ होइनस्?'
कुमारको मुखबाट मास्क खोल्न लगाए।
कुमार नै हो भन्ने पक्का भएपछि उनीहरुले मोबाइलबाट अरु सहयोगी डाके।
'आफ्नो कोड भाषा प्रयोग गर्दै कुमार भेटिएको छ आउनुस् भन्दै बोलाए। २ /३ मिनेटमै मोटरसाइकलमा अरु दुई जना आइपुगे,' उनले भने, 'दुई जना आउनासाथ कुमारजीलाई गोली हाने। त्यति गर्दा एक जना हाम्रा साथी त्यहाँबाट भागिसक्नु भएको थियो।'
गोली चलेलगत्तै कुमारको शरीर बारीको डिलतिर ढल्यो।
'मतिर गोली चलाउन थालेपछि जंगलतिर भागेँ। गोली चलाए पनि मलाई ताकेरै हानेनन् जस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'नजिकबाट हानेका थिए। ताकेकै भए मलाई पनि लाग्थ्यो।'
उनका अनुसार दोहोरो भीडन्त यतिमात्रै हो। प्रहरीले भने उनीहरुसँग भीडन्त हुँदा पेस्तोल बरामद भएको समेत जनाएको छ।
'त्यसपछि के के भयो तपाईंलाई थाहा होला। हातमा पेस्तोल राखिदिएछन्। दोहोरो भीडन्त भनेछन्...,' उनले भने।
दोहोरो भीडन्त भएको खबर पाएलगत्तै कुमारसँगै रहेका उनका आफन्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा खोजीका लागि निवेदनसमेत दिए। पछि उनी आफैँ आफन्तको सम्पर्कमा पुगे।
(आज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उक्त घटना फेक इन्काउन्टर रहेको भन्दै सरकारलाई संलग्न प्रहरीमाथि कारवाहीको निर्देशन दिएको छ। माथिका सामग्री पहिलोपोस्टले घटनापछि गरेको फलोअपको मुल अंश हो।)